dab dhaliyay khasaaro hantiyeed oo xalay Muqdisho ka kacay. – Hornafrik Media Network
Hornafrik-Dabkan ayaa ahaa mid ku bilowday dar dar xoogan cabsina ku beeray dadka degan xaafada uu dabku ka kacay.
Waxaa uu dabka ka bilowday garaash lagu xareeyo gaadiidka oo ku yaala xaafada hanta dheer qeybta degmada Hodan ee Gobolka banaadir saacdu waxaa ay ku dhaweyd saqdii dhexe ee xalay.
Intuu uu socday dabka waxaa u ku bas belay hanta taalay halka uu ka kacay iyo kuwo ka dhawaa , waxaana dadka ku dedaaleen in ay damiyaan weeyse ku adkaatay oo mudo ayay qaadatay in la helo gaadiidka dab damiska ah .
Gaadiid ku xareysanaa garaashak ayaa qarkood bas belay waxaana kamid ahaa sadex gaari nuuca Homey da loo yaqaano iyo sidoo kale dhowr bajaaj waxaa kale oo dabku gaaray goobo ganacsi oo ka dhawaa garaashgka kuwaas oo hanta ku bas beeshay sidoo kale.
Shacabka ayaa xiriiro la sameeyay laamaha dab damiska ee gobolka banaadir waxaa sido kale mudo ku adkaatay in ay gaaraan halka uu dabka ka socday oo wadooyinka intiooda badan ayaa ahaa kuwo xiran oo aysan gaadidku mari karin.
Ugu danby dedaal ay sameeyeen shacabka degan xaafada ayaa waxaa lagu guuleystay in dabka oo laga cabsio qabay inuu sii fido la damiyo.